Qeexitaanka qeexida ee Sony Xperia 20 ayaa tilmaamaya Snapdragon 710 | Androidsis
Noocyada cusub ee Sony Xperia 20 waxay u muuqdaan inay tilmaamayaan Snapdragon 710 inuu yahay SoC
Haaruun Rivas | | Noticias, Sony
Dhamaadkii Febraayo, Sony waxay soo bandhigtay bartankeeda cusub, kaas oo ka kooban Xperia 10 iyo 10 Plus. Labada taleefanba waxaa loo soo bandhigay processor-yada taxanaha ah ee 'Snapdragon 63X', waana sababta ay uga sarreeyaan terminaallo kale oo dhexda ku yaal oo suuqa yaalla.
Si kastaba ha noqotee, beddelkoodii, ayaa Sony Xperia 20, waxay qalabeyn doontaa wax ka awood badan, shaki la'aan. Daadinta cusub ee aan hoos ku soo sheegeyno ayaa tan soo jeedinaysa, iyo sawirada laga bixiyay, oo ah kuwa kor lagu muujiyay horayna u soo muuqday, ayaa noo sheegaya wax walba oo ku saabsan muuqaalka suuragalka ah ee aaladda.
Sida laga soo xigtay sumhoinfo, isha warka Sony Xperia 20 waxay la socotaa shaashad 6-inch ah oo LCD ah oo leh FullHD + qaraarka iyo saamiga 21: 9, sida aan horay u soo sheegnay ee Xperia 10 iyo Xperia 1laakiin sida muuqata wali ma lahan naqshad casri ah. Tani, markaa, waxay adeegsan doontaa a Snapdragon 710, Chipset-ka 'Qualcomm chipset' oo aad uga sarreeya Snapdragon 630 iyo 636 oo laga helay Xperia 10. Wixii ugu dambeeyay waxaan dhahnaa waxay noqon doontaa hormar la taaban karo oo xagga awoodda iyo waxqabadka ah.
Sony Xperia 20 nooc xaday
Si loo waafajiyo shaqada SoC, 4 iyo 6 GB oo RAM ah oo leh 64 iyo 128 GB oo ah kaydinta gudaha, siday u kala horreeyaan, waa waxa aan yeelan doonno. Waxa kale oo xusid mudan nidaamkeeda dambe ee sawir qaadista, kaas oo ka kooban laba dareemayaal xallin 12-megapixel ah. Dhinaca hore, dhanka kale, wuxuu leeyahay kiciye aan la cayimin.
Waxa ugu dambeeya ee faahfaahsan waa inay leedahay cabirka 158 x 69 x 8.1 mm, in kasta oo aan waxba laga sheegayn culeyskiisa. Xogtaan iyo kuwa kaleba waa inay cadeeyaan shirkada mustaqbalka, ama waxyaabo kale oo daadanaya. Si kastaba ha noqotee, illaa inta wax rasmi ah ama sax ah aysan muuqan, wax kasta oo soo kordha, hadda, waa in lagu sifeeyaa inay yihiin mala awaal. Weli, waxaan iska ilaalin doonnaa wixii war ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Noocyada cusub ee Sony Xperia 20 waxay u muuqdaan inay tilmaamayaan Snapdragon 710 inuu yahay SoC
OnePlus ayaa dammaanad ka bixin doona taleefannada laga keeno Shiinaha
LG wuxuu u jeestay soo saaraha BOE bandhigyada casriga ee OLED